Waa maxay iyo sidee buu u shaqeeyaa Warp Charge 30 ee OnePlus 6T? Androidsis
Warp Charge 30: Waa maxay iyo sidee ayuu u shaqeeyaa kharashka degdegga ah ee cusub ee OnePlus 6T
Eder Ferreño | | OnePlus, Tababarada
Isla toddobaadkan ayaa OnePlus 6T McLaren Edition. Daabacaad gaar ah oo ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha oo kaashanaysa McLaren. Qeybtan cusub ee aaladda waxaan ku helleynaa horumarinno taxane ah, sida RAM dheeraad ah ama nidaam lacag-bixin oo deg deg ah oo cusub, in aan horey kuugu sheegnay kadib soo bandhigideeda.
Nidaamkan cusub ee qalabku ku jiro waa kharashka degdegga ah ee Warp Charge 30. Waa tiknoolajiyad cusub oo summaddu isku dartay. Laakiin waa maxay Warp Charge 30 runti? Astaantu waxay ku dhawaaqday inay u oggolaatay inay taleefanka ka qaaddo is-maamul ku filan maalinta oo keliya 20 daqiiqo.
Shaki la'aan, tiknoolajiyaddan xawaareynta degdegga ah loogu talagalay daabacaddan gaarka ah ee OnePlus 6T wuxuu la yimaadaa horumarinno muuqda. Sababtaas awgeed, wax badan ayaan ka sharxi doonnaa hoosta, si aad u ogaato dhinacyada ugu muhiimsan ee ku saabsan iyo furayaasha ka dhigaya tiknoolajiyad sidan u muhiim ah.
1 Waa maxay Warp Charge 30
2 The OnePlus 6T McLaren Edition xeedho
Waa maxay Warp Charge 30
Warp Charge 30 waa nidaamka cusub ee xawaaraha lagu buuxiyo in soosaaraha Shiinaha uu soo saaray si loogu isticmaalo buuggan OnePlus 6T McLaren Edition. Waxaan si joogto ah u aragnaa sida nooc kasta u abuuro nidaam u gaar ah taleefannadiisa. Waxay noqotay tikniyoolajiyad gacan ka geysaneysa kala soocista noocyada, iyada oo ah qiime dheeraad ah. Tanina waa nidaamka cusub ee OnePlus soo bandhigo.
Waxyaabaha cusub ee noogu imanaya Warp Charge 30 ayaa ah in awoodda lagu wareejiyo hal unug. Illaa iyo hadda, tan ugu caansan ayaa ah in xawaareynta degdegga ahi ay tahay teknoolojiyad unug oo labalaab ah, oo laba koronto siisa laba baytar oo kala duwan, in kasta oo ay u shaqeeyaan sidii mid keliya. Laakiin sumaddu way bedeshay kiiskan. Waa la keenaa lix amps oo hadda ah iyo awood 30 watts ah.
Tani waa wax si weyn ugafiican nidaamyada kale ee xawaaraha degdegga ah ku shaqeeya ee unugyada kale. Tan iyo waxa caadiga ah ee iyaga ku jira waa kan hadda ah ee afar amps iyo 20 watts oo awood ah. Sidan oo kale, Thanks to Charge Charge 30, waxaad heleysaa madax-bannaani kugu filan maalinta oo dhan waqti ka yar.
Sida ay ka yiraahdaan magaca Shiinaha, Waxay u oggolaaneysaa inay siiso madax-bannaanida daabacaddan OnePlus 6T kaliya 20 daqiiqo. Marka waxa caadiga ah ee moodooyinka kale ay yihiin inay yihiin 30 daqiiqo oo lagama maarmaan u ah. Xaaladdan oo kale, sida ku cad astaanta, waqtigan 20 daqiiqo ah, 50% batteriga qalabka ayaa lagu soo oogi karaa. Xogta qaar hore ayaa loogu kala shaandheeyay kahor soo bandhigiddooda.
Dareenkan, fure waa bilowga hawsha lacag bixinta. Gaar ahaan waa la dedejiyey qaybtaan, si aad tamar badan ugu hesho daqiiqado ka yar. In kasta oo, wadarta culeyska OnePlus 6T ee nidaamkan ay ku sii socoto si la mid ah tan moodooyinka kale ee ku dhex jira aagga sare. Waxay qaadataa illaa 60 daqiiqo in lagu dhammaystiro 100%, haddii aad ka soo rarto xoq.
The OnePlus 6T McLaren Edition xeedho
Si nidaamkan Warp Charge 30 uu u shaqeeyo, xeedho gaar ah ayaa loogu baahan yahay tan. Tanina waa tan aan ka helno sanduuqa qalabkan. Waa mid ka mid ah furayaasha tikniyoolajiyaddan ay sumcadda Shiinaha ku soo bandhigayso noocyadan dhammaadka leh. Thanks taas oo ay suurtagal tahay in laga faa'iideysto.
OnePlus iyo McLaren waxay ku midoobeen quwaddan xeedho. Sidan oo kale, adoo adeegsanaya tikniyoolajiyaddan, nidaam ku-faafidda kuleylka ayaa la soo saaray. Waad ku mahadsan tahay, kuleylka ayaa ku sii jiraya adabtarada Warp Charge 30, kuleyl aad u yar oo gaaraya taleefanka. Tani waxay u oggolaaneysaa taleefanka inuu si dhakhso leh u soo dallaco. Sidoo kale inay ku shubanayso xawaare sare, xitaa haddii aan telefoonka isticmaaleyno waqtigaas. Wax la yaab leh, maxaa yeelay inta badan waa mid ka mid ah waxyaabaha caadi ahaan inaan la sameyn.
Gaaban, Tikniyoolajiyaddan xawaareynta degdegga ah waxay u taagan tahay horumar u soo saaraha Shiinaha. Nooc kasta wuxuu sii wadaa inuu kaligiis sharad galo, in kastoo dhowaan OPPO liisankaaga iska leh noocyada kale. Marka waxaan arki doonaa horumar badan oo arintan la xiriira bilaha soo socda. Laakiin iyada oo loo yaqaan 'Warp Charge 30', OnePlus wuxuu cadeynayaa inuu yahay mid ka mid ah jaangooyooyinka qeybta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Warp Charge 30: Waa maxay iyo sidee ayuu u shaqeeyaa kharashka degdegga ah ee cusub ee OnePlus 6T
Dagaallo caan ah ama sida jidhkaaga looga ogaado waxa loola jeedo saameyn wax ku ool ah
Nooc heer sare ah oo loo yaqaan 'RPG' oo ku saleysan 'Dragon's Watch'